Qalabka ajaanibta wuxuu muhiimad weyn siinayaa faa'iidooyinka qiimaha shirkadaha. Dhiggooda gudaha waxay ku tiirsan yihiin kabista iyo dakhliga. Macaamiisha bartilmaameedka ah ee qalabka gudaha iyo dibaddaba waxay ku xiran yihiin goor hore, warshado gaar ah, iyo shirkado leh rajo ganacsi. Waxay ka go'an tahay inay siiso iyaga ilo dhaqaale oo ka maqnaa heerarka hore ee koritaanka si looga caawiyo inay gaaraan koboc dhaqso leh oo ku saabsan qiimaha ganacsiga.
Marka loo eego aragtida maareynta silsiladda qiimaha, macnaha qaabka ganacsiga waxaa loo qaybin karaa cabirro sida meelaynta qiimaha, abuurista qiimaha, xaqiijinta qiimaha iyo wareejinta qiimaha. In kasta oo ay jiraan codsiyo aasaasi ah oo caalami ah oo loogu talagalay aaladaha gudaha iyo shisheeyaha ee afartaas cabbir, oo ay ku xaddidan yihiin kala duwanaanshaha nidaamka, dhaqaalaha iyo dhaqanka, jihada sahaminta iyo qaabka soo degitaanka aaladaha warshadaha ee gudaha iyo dibaddaba way ka duwan yihiin.
Qalabka ajnebiga ah wuxuu fiiro gaar ah siinayaa dhaqanka Abuuraha iyo ku soo noqoshada tiknoolajiyada sare ee maalgashiga, waxayna u muuqdaan inay adeegsadaan helitaanka saamiyada shirkadaha ama iibinta saamiyada shirkadaha si ay u soo goostaan ​​lacagta ugu badan ee ah habka ugu weyn ee faa'iidada, ayna sameystaan ​​awood is-adeegsi isdaba-joog ah , iyada oo loo marayo ururinta tikniyoolajiyadda iyo bandhigga mashruuca si loo helo sumcad;
Qalabka gudaha wuxuu si dhow u dejiyaa yoolalka horumarineed ee la filayo ee ku wajahan jihaynta siyaasadda iyo dejinta qiimaha warshadaha, dardargelinta is-weydaarsiga kheyraadka iyo diiradda saaraya furitaanka warshadaha, tacliinta iyo cilmi-baarista, faa'iido u helidda shirkadaha, iyo si joogto ah u uruurinaya ilaha iyo saamaynta sumadda si ay u sameeyaan saameyn baraf.